Hakuna chifananidzo chinogona kuponesa
→ Jesu chete ndiye anogona kuponesa.
→ Kudhindiswa kwemharidzo yaHolger Nilsson kubva 03.01.2021.
Humireniyamu Humambo - HweMesiya Humambo hwaMwari Pasi Pano
→ Chii chaizvo chinonzi Umambo hweMireniyamu, uye chinangwa chayo ndechei?
Chiporofita muTestamente Itsva
→ Pauro anoti uyo anoporofita anovaka kereke. Mira! Haavapi here ?!
Jesu ari mumakore ekudenga - foto isingazivikanwe kubva kuFinland
→ Rimwe zuva chiratidzo ichi chichava chechokwadi.
Jesu Mwanakomana waMwari
→ Murume akaporeswa akatanga kutenda kuti Jesu aipfuura muporofita. Jesu pachake akaudza murume uyu kuti ndiye Mwanakomana waMwari.
Izvo zvisingadiwe zvave kudikanwa - chikamu 2
→ Yekutanga Baptist Baptist Pentekosti 150.
Bhaibheri rinotaura zvakajeka nezveTiriniti
→ Hazvigone kusanzwisiswa!
Chiedza chakajeka mumufananidzo kubva kunopera makumi matanhatu
→ "Chinhu chekudenga!"
Husiku hwakarebesa uye Izvo Zvisingadiwe
→ Krisimasi zvipo matipi!
Kisimusi marori uye tariro yenguva dzekorona
→ Jesu anotipa ramangwana uye tariro.
Vanopfuura vanhu vasere mukuungana kwevanhu uye zviitiko zveveruzhinji zvinorambidzwa
→ Kubva 24 Mbudzi, vanosvika vanhu vasere vanogona kutora chikamu mukuungana kwevanhu uye chiitiko cheveruzhinji muSweden. Kurambidzwa kunoshanda kwemavhiki mana.
Therese Basourus Ivarsson Pachigaro chemberi - Akaonekwa aine MS kwemakore gumi nemanomwe, nhasi nenzira inoshamisa ane hutano
→ "Therese akaonekwa aine Multiple Sclerosis, MS. Chitupa chekurapa chinoti hachirapike asi akaona chishamiso Jesu paakaporeswa naye."
Sarudzo dzeUS: Vezvenhau havasati vadzidza chimwe chinhu here?
→ Nguva yekupedzisira, sezvazvino, vezvenhau vakadzinga Trump uye vaive vasina kururama. Iye zvino vanomuverengera zvekare uye vakatokanganisawo!
→ Vazhinji vakafa uye vakakuvara vanonzi. Mumwe wemagandanga akapfurawo bhomba rekuzviuraya.
→ NdiTrump here kana Biden anokunda manheru ano? Komenda!
Vatema Hupenyu Matter unopisa maBhaibheri
→ Nguva ino haisi kungotambudza chete asiwo yechiporofita.
Tegnértornet muGränna - Zvinoshamisa maonero!
→ Ona maonero uye chinzwa Christer Åberg's hallelujah kuchema uye nekukurumidza kuzivisa kugamuchira Jesu uye kuti vaponeswe!
Isu tinorarama munguva yemaroto manomwe ekuzvarwa
→ Chaizvoizvo, hapana chikonzero chezve chero zvakazarurirwa pamusoro pezvichaitika munyika yedu nhasi. Hakuna murume anofanirwa kuzviratidza semuporofita uye achiti izvi uye izvi zvichaitika. Jesu anga atoporofita nezvazvo
Testamende Yekare inoti Mwari ane mwanakomana
→ "Kubva kuIjipita ndakadana mwanakomana wangu."
→ Zvino kuti ungano nemakereke varikuenda online nguva dze corona, havafanirwe kupotsa meseiro yeruponeso pamusoro paJesu Kristu kune vasina kuponeswa.
→ Mhando dzose dzemhondi dzinofanira kurambidzwa!
Waponeswa here kana ukatadza?
→ Kutenda muna Jesu kunoponesa, asi kana uchinge uchitadza?
MaSweden anopomedzerwa mhosva yekutyora mutemo weEstonia
→ Mutemo wakadaro unoshanda chaizvo kana uchida kuvanza chokwadi.
Bhuku rangu rechipiri: Isingadiwe
→ Iyo nyaya iri yechokwadi yakasimba kwazvo uye ine moyo munyoro uye inosiya pasina munhu aibata.
Hapana chimwe asi Knutby
→ Sezvo isu takabatikana neiyo chaiyo, hatifanirwe kupa simba redu nesimba kune venhema.
Ko chiporofita cha 2007 chaDonald Trump chichaitika?
→ Chiporofita kubva muna 2007: VaTrump ndeve mutungamiri anoshandira - mune maviri mazwi!
Vaparidzi vechiKristu vakatenga vatanhatu
→ Kutengeswa kwebonde kwakaitika munaNovember asati atorwa nemushandirwi iye zvino uyo amudzinga.
Iko kunemakumi matanhatu nenomwe 666 muecona yekudzivirira?
→ Bhaibheri rinotii?
Kukwira kudenga kwaJesu kunoratidza kuti ndiye Mwari
→ Bhaibheri rinoti Jesu akakwidzwa kudenga ndiMwari!
Iko kudengenyeka kweKiruna chiratidzo chenguva?
→ Ndiro kudengenyeka kukuru kupfuura zvese zvakambotaurwa muSweden.
→ Mwari akamutora!
→ Muchitsauko 7 chaEzekieri, Ishe vanoporofita kunaEzekieri uye vanotaura nezvenguva yerima nedambudziko rinouya. Tsaona yakasarudzika zvachose, uye yega mune yayo mhando.
Mumiriri weNorth Korea mudzvinyiriri Kim Jong-Un achirwara zvakanyanya
→ Anonzi akarwara mushure mekuvhiyiwa.
Zvipenga zvezvipenga zvinotiza pasi nekuda kweiyo hutachiona hwe corona
→ Dzidziso dzinoverengeka dzekurangana dzave kuita mukubudirira kwedenda.
→ Chero bedzi nguva yeungano ichipera pano pasi, Nyasha dzinoshanda. Iye zvino chero munhu anogona kuuya kuna Jesu uye agoponeswa!
→ Asi ona achaita Muponesi wedu Jesu Kirisito muchato wakamirira isu!
Corona hutachiona nzvimbo panzvimbo yerufu
→ Ndeipi nzvimbo iyo hutachiona hwe corona gumi pagumi pane yepamusoro rondedzero yekufa gore rino?
Jesu haatongi munhu
→ Naizvozvo, chirwere chekorona hachisi kutonga kwaMwari.
Maporofita uye Corona
→ Zvino, ngatitarisei kune izvo vaporofita veTestamente Itsva vane basa uye basa reBhaibheri.
Chiporofita chaDavid Wilkerson paCorona Pandemic 1986
→ Ndiri kuona dambudziko riri kuuya pamusoro penyika. uye mabara, makereke nehurumende zvakavharwa.
The zvinodhaka uye Porn Surfing kunowedzera Corona Denda
→ The kutevedzerwa voga kunokonzera zvazvinoita zvikuru vanhu vazhinji
Corona utachiwana: Hurumende vachikumbira zvikuru simba
→ Izvi zvinonyanya ngozi ngozi! Ko uyu danho rekutanga imwe udzvinyiriri?
→ Asi China ane zvishoma vanotambura?
Adam-nguva isati vekudenga husingaperi
Monitoring Society coronavirus njanji
→ In coronavirus Makwara tinonyatsoona kuti muBhaibheri kuzvidzora uye zvokuongorora nzanga yakavakirwa.
Uyai zvakare kuna Jesu
→ Chii WAKAFIRWA, unogona kunhonga zvakare. Uyai Jesu uye kugara patsoka dzake.
kudzoka kwaJesu - vanhu vaponeswe chete
→ Pashure pezvose 300 mashoko aJesu okutanga kuuya azadziswa, zvinofanira kuti kwete zvose uprofita pamusoro wake kudzoka rini?
Anoprofita Asterix muna 2017 kuti coronavirus?
→ In enyambo bhuku Asterix uye guru rudzi kubva 2017 kuzivikanwa mumwe vakwikwidzi nokuda coronavirus.
National Day Womunyengetero rakazivisa naMutungamiri Donald Trump
→ Chikonzero ndechokuti kuponesa America kubva Corona utachiwana.
Corona: A akafa - Pandemic - Collections Large wairambidza
→ Corona Utachiona zvino semhosva yakakura dambudziko, muunganidzwa 500 wairambidza, izvo zvinoreva kuti machechi kutambura.
Mwari haasi anonzi Allah
→ Allah haazi Mwari weBhaibheri kunoratidzwa muna chedzidziso vaMuslim.
Max Von Sydow rufu - airidza Jesu George Stevens murume kubva kuNazareta
→ Firimu ndicho anodhura bhaibheri firimu nokusingaperi akabudiswa.
Jesu ndiye munhu chaiye
→ Jesu ndiye murume chaiye. Strong kuburikidza nokuzvininipisa kwake uye rudo.
Mhombwe huru Harald Gustafsson
→ Ndiyo kereke yevatadzi, iyo inogadzirwa mumufananidzo - chiKristu chenhema.
Mhaka Corona-kutya Chinoziviswa
→ Hurumende anoda akavezwa mubayiro!
Corona Utachiona paachabvisa mhepo
→ Kumabvazuva uye nechepakati China vari senitrogen yakasviba kubva mafekitari, simba zvinomera uye motokari, yakaderera nezvikamu 10 kusvika 30 muzana.
Corona lowers peturu
→ Petrol mutengo yaiva 30 masendi isingadhuri nhasi.
Mwari anotumira hapana mitongo
→ Asi, akatuma Jesu uye Mweya Mutsvene pasi redu!
Corona utachiwana 'lethality inowedzeredzwa
→ Vanhu vakawanda vane utachiona kuva munyoro zviratidzo zvinowanzoitwa chando, nefivhiri uye kufema zviratidzo, uye achapora nokukurumidza zvikuru.
Paging musi Apg29
→ Pane kudiwa?
Corona utachiwana 'lethality
→ Vaya vakafa muna China akava avhareji yezera makore 79.
Ko Mwari kana pepanhau Dagen kuti masimba? - Achitaura bönekonferensen Nordic nyika mudane ari Solna
→ I kuwana Pensive, Pazvinoitika, nokuti anotsvaira parutivi tsoka dzenyu pamusoro pazvose I kare akafunga se iziviswe sokunge "rakabva Mwari."
Saka ndakaita greenscreenen yokurenda nemhuka
→ Mumwe munhu akabvunza kana imbwa yangu, kwete, hazvina kuitwa nezvinhu girini chidzitiro!
Vanotsvakurudza kuuya mukare anodudzira nezvekuguma kwenyika mashoko
→ Zvino masayendisiti akawana kutyisidzira chaiko kumamiriyoni evanhu panyika.
Armand Duplantis akatora nyika zvinopupura padanda rakatenderera pa 6 metres uye 17 masendimita
→ Asi tariro yedu kuti vanotenda muna Jesu ndivo yakakura!
Hacker kuedza musi Apg29
→ Rave akadzokorora kugura kuedza musi Apg29 sezvo SQL majekiseni.
→ Vose arwara regai kufa!
"The chiyero rukuru rwakaratidzwa"
→ How Mwari kana chiyero rukuru rwakaratidzwa kuSweden?
Dzidziso uye chitendero Buddha vaisagona kumuponesa muBuddha mumongi muMyanmar
→ "Ndakava ichitorerwa simba, afenda uye akasiya muviri uye akafa."
Dai waiziva chipo chaMwari
→ Vazhinji vanhu nhasi vanogara zvachose mukusaziva nezvaMwari uye upenyu waanobayira.
Murume ari muhero
→ Verenga ichi uye kuona zvakanaka akaita firimu nezvaJesu 'nyaya mupfumi naRazaro. Nyaya haisi kuenzanisa. Zvakanyatsoitika.
Hazvina zvebhaibheri kuvakadzi vapristi
→ - Uye kwete varume kana!
Chii chakaitika kumuviri waMozisi?
→ Asi chii chakaitika kune muviri waMozisi pamberi payo akavigwa? Rugwaro runoti chinhu nezvazvo?
Holger Nilsson anotaura Christer Åberg makakatanwa United States - Iran
→ Pachava hondo yenyika wechitatu zvino?
→ Pano unogona kukurukura zvose pasi pezuva, kana chete nesu nyora!
Kana uchida taura nezvaJesu uye sei kuti ndiponeswe?
→ Ita ichi musi Apg29 kana kutanga ruponeso pachavo Blog kwenyu!
Lovemore hondo huru pakati US uye Iran?
→ The US chitundumuseremusere kurwisa zvingaita kuti chikuru hondo muMiddle East, anoti Rouzbeh Parsi, Middle East nyanzvi panguva UI.
Iyo Bhaibheri I yaizotsaurwa?
→ KJV kana King James Bhaibheri Swedish?
→ Kana ndiyo inonyanya nzira kuti isu kubvunza unbiblical?
19 madhigirii January 2, 2020 kuNorway
→ Global kwepasi chimwe chikonzero, maererano nevaongorori.
Unofungei pamusoro Apg29?
→ Saka pano pazuva rokupedzisira, ndinoda kuziva zvamunofunga pamusoro Apg29.nu?
The gandanga kubhombiwa muna 2019
→ 336 kubhombiwa muna 2019 kuSweden. Vangani vavo vakanga kuitwa nemagandanga?
→ Chikonzero kuti vaKristu vanotambudzwa muNigeria raMwari Islamist nokudzvinyirirwa.
Youprofita kuti 2020: The wokupedzisira mashoma apfuura - Gösta Karlsson
→ Kudzidzisa ouprofita Gösta Karlsson
Mobile - yedu nguva ishe
→ Zvino yava nguva yokuti nezvemuchato chirwere National itsva.
VaKristu musoro on Christmas Day
→ Morden anoratidza zvakare kuti vaKristu ndivo vachitambudzwa zvikuru boka.
Iwe tora kudenga kana kuzviuraya?
→ Norwegian Princess Martha-Louise Aimbova murume Ari Behn ane akazviuraya nemakore 47.
Jesu akazadzisa Mutemo
→ Tiri kuita izvozvo?
Sister Zipora uye Rachael zvakaratidzwa yekubvutwa
→ "Seiko, nei kurumidzai mukasadaro kuparidza? Unogona here kuona? Hapana zvimwe nguva!"
Nyevero vaprofita venhema
→ Ngwarira nevanin'ina kubva kwemutemo vanhu, vari nyepera uye venhema zviporofita.
→ Sei mamiriro ezvinhu zvino muIsraeri.
Lucia - Dhiyabhorosi Bride
→ The chokwadi pamusoro Lucia.
Unoziva kutsigira Apg29?
→ Zvadaro unogona kudaro pano.
→ Ndapota, sununguka kuita andibate!
→ Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutowo upi neupi.
→ Zvino ndinoda kuzopupurira yakaipisisa handina ruzivo maererano kumanikidzwa nemauto nemadhimoni.
→ Kana iwe kugamuchira Jesu saka zvinoitika kuti munhu zvishamiso. It achaponeswa - zvinoreva kuponeswa.
Bhaibheri rinozivisa naKristu
→ Anopesana naKristu kunozivikanwa Anorambwa naPetro matatu.
World Evangelist Reinhard Bonnke afa
→ Mamiriyoni akashanyira misangano ake uye vanhu vakanga atoponeswa.
→ muKristu anogona kuva akasiyana?
The mutoro haisi yenyu
→ Pachena zvakanaka zvose yakawanikwa kuti kutya, uye kutya mumwe chakaoma uye vavengi vedu?
Kuitwa mutsvene rinowanikwa nevateveri ziviso vaJesu
→ Noutsvene uye ruponeso kana kururamiswa, haisi chete.
→ Ndichaita kufunga kwangu yekare mienzaniso muna Kristu kuti paiva mumakore angu okutanga somuKristu. Vakandipa zano uye nyaradzo, asiwo vakatsiura.
KwaJesu - chii chishamiso
→ Christer Åberg anotaura pamusoro kwaJesu uye nziyo nokutamba mumaminitsi 29.
→ Man haagoni kuita pachake akarurama.
→ Ndeupi pepanhau chaunacho izvi sexrubriker?
Pakuyeuka mufundisi vakashinga muna Cuba
→ kukura chechi Cuba raMwari!
Vanofanira pasingadiwi aurayiwe?
→ Ndinofanira kurangwa norufu sezvo kunaka?
Christer Åberg muna Tannåker nemakore 90s
→ Ndini ani mumufananidzo?
→ The Catholic Church iri kure chaizvo panyaya pakukwirira Mary saka uyewo kure zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro paro.
Jesu Kristu, tariro yedu chete, kuwa murume uye urongwa hwaMwari cheruponeso
→ Nechekare muna 1 Genesis 3, tinoona zano raMwari anotanga kutora chimiro.
→ Kazhinji akarondedzera Jesu bvudzi refu, asi ndizvo here nezveBhaibheri?
Akaedza kupondwa Donald Trump
→ Trump tasters akarwara pakarepo pashure pokunge muchetura.
Ona firimu munyika yokutanga nezvaJesu
→ Ndicho firimu chete kuti chose akanyorwa zvebhaibheri nzvimbo!
Want mutongo kana tsitsi?
→ Zviri nyasha unoponesa handiruramisirwi.
Mwari anoda hapana kutambudzwa
→ Aiva Mwari anga kuti isu vaizotambudzwa, ipapo angadai zvimwe zvikuru pane 1 Timoti 2: 2.
Chii Jesu akanyora mujecha?
→ Uchaona mhinduro inonakidza!
mabhuku Children pamusoro weyoga
→ Yoga anotora chikoro uye kukireshi.
Kururama kwaKristu kunobva kwamuri
→ Teerera pano! Nokutenda muna Jesu Kristu isu tiri vatsvene.
→ Isai inobva encryption, digitaalinen zvitupa uye digitaalinen vakasaina (unoenderana vakasaina nguva kadhi kutenga).
→ Tingaitei kuitawo mamwe kutenda, kurei uye kutenda?
→ KJV zvino ine yayo Website: bibelonline.se
→ Uye vamwe netiquette ari netsanangudzo Apg29
→ MuBhaibheri, pane mhuka dzakawanda.
Nhasi kune nyika guru kumutsidzirwa
→ Zuva nezuva, vanenge 780 000 vanhu kutenda muna Jesu!
Review: No vamwe vamwari
→ Christer Åberg Kudzokorora Per-Arne Imsens bhuku yakakurumbira No vamwe vamwari.
→ Mashoko zvebhaibheri iri youprofita / Mutsvene akapomera zvikuru saka kune yedu, "anofanira" gurgle uye bvudzi pamisoro yedu kumukazve.
The skyscraper kuti angadai anopararira
→ Pasinei akapfuma munhu zvakadaro "muridzi" iye bedzi wenhamo shoma chekuchengeta nzvimbo mune yekombiyuta.
Aimbova mufundisi Pentecostal Michael Karlendal kusiya Catholic Church
→ Iye anotendeuka kwete nekuda mubhaibheri nechivimbo, asi nokuda munhoroondo zvikonzero. Nechekare ichi chinofanira kuva yambiro zviedza kutendeukira tsvuku.
The Zvipikiri Munzeve: Halloween iri guru romutambo wedu
→ A rufu "mabiko" izvo kunyanya inokanganisa vana.
→ Zvakafanana ne Enoki. "Iwe vamuona iye ndikasazovapo." Iye chete akanyangarika pasina zvikasawanirwa.
Uchawana Jesu 2036?
→ Asi kana chaizvoizvo Jesu achiuya shure muna 2036 saka ane mubhaibheri kubvutwa kuchaitika 2029th
→ Preschool kuda "kuponesa okunze" vose vana kudya miriwo.
→ The Bible rinoti tinofanira kubatwa mumakore. Cherechedza kuti anomuka. kutungamirira Our Saka kumusoro.
Rufu chirango ngochani iri mumagwaro
→ Vanoita izvi achitaura pakutenda kwechiKristu. Asi chokwadi ichi chose unbiblical.
Abu Bakr al-Baghdadi afa - anova IS kuipa zvino?
→ Kutyisa mutungamiriri IS rakabayiwa mune US bvuta. Al-Baghdadi aiva miteva iri Islamic nhoroondo akaparirwa nguvo yake kuzviuraya, achiuraya pachake uye vatatu nevana vake.
guta rouprofita Jerusalem
→ MuKristu wose anofanira kuona Jerusarema mumaonero rouprofita.
The Bible rinoti unofanira kugamuchira Jesu
→ All ndima idzi dzinoratidza kuti unofanira kugamuchira Jesu!
→ The kuenda ndiyo nyika kudenga, isu mumweya yedu zvinogona glimpsed kure.
→ Havatendi kuti vatorwa vakauya vakatora nesu. Hachisi chokwadi.
Regai kupomera nyika kana asingadi kuparidza nezvaJesu
→ Ndicho basa revaKristu kundoparidza nyika - kwete nyika!
→ Apg29 anoshandisa makeke.
Hall yakarambidza kubva YouTube
→ Pastor vaviri Stefan uye Mary Hallman rakarambidzwa kubva YouTube.
The zvose akasikwa neshoko raMwari
→ Ivo vanokanganwa kuti vose nguva kuti vanhu vanotenda kuti pasi rakatenderera. Kunyange Bhaibheri rinotaura rakatenderera pasi!
→ Israeri vakadzorerwa sorudzi uye vaJudha vakaungana kunyika.
kudzoka kwaJesu asati kutambudzika
→ Panguva kubvutwa, Jesu anouya kuchechi kwake paanosvika pamugumo kutambudzika, unouya pamwe neungano yake.
Mufudzi akanaka munyika Close
→ Zvinonzi mhedziso zvinorwadza kupfuura uyu, sei nokusingaperi siya NOMUFUDZI?
The kutenda sandara Earth iri mumagwaro
→ Pfungwa yokuti chechi muMiddle Ages vaidavira kuti pasi rakanga rakati sandarara nhema kubva shanduka
Ethiopian Prime Minister Ahmed Abiy, akazvipira muKristu, Nobel Peace Prize 2019
→ Ethiopian Prime Minister Ahmed Abiy kugamuchira Nobel Peace Prize muna 2019 pakubudiririsa rugare uye rwakapedza vachinetsana pedyo Eritrea.
General ATMs uye ATMs
→ Part mana rinonzi The cashless rangano kubudikidza Cash Only.
→ Trolls vanoda kudzivirira vanhu kubva rurege Naizvozvo saka usingafaniri zvokudya vaponeswe.
Halloween - usiku izere madhimoni
→ Chokwadi pamusoro Halloween. Halloween chinhu kupfuura tsika imwe wechihedheni wekare kuti hapana anofanira kuita, mudukusa zvose muKristu. Rufu uye zvakaipa akudzwa.
→ Part matatu rinonzi The cashless rangano kubudikidza Cash Only.
Mufundisi munamato chakakomba haana shamisa
→ Pepanhau The zuva vakaita zvokunakidzwa mufundisi vanoverenga foni paakanga achinyengetera.
→ mhenyu chirongwa Christer Åberg kuti maminitsi 29 kubva pamba Studio muna Meadow
Israel - mukuru nguva mutambi
→ Tine kunzwisisa mukuru zvose nguva vatambi - Israel?
Uchapupu: Sei ndakaziva rubhabhatidzo Mutsvene
→ Ndinorangarira akati, "nokubhabhatidzwa noMweya kuti simba."
Kontantlöshetens "Antiquity" uye tanga munhau
→ Kubva mubhuku rinonzi The cashless kumukira. Mazuva ano pfungwa, pfungwa akasimuka kuti ruzhinji cashless kutenga muna 1949.
matanho manomwe munzira kutenda
→ Nhano yako yokutanga munzira kutenda.
The cashless chizerenga - Mashoko Okutanga
→ Cash vanozvishandisa ishiri Savacheche Small vasingazivi chakanaka yavo.
Kwete, Greta haasi kwaAntikristu
→ Ndava muverengi neindaneti akatumwa kwandiri apo munyori nezvishamiso kana makore 16 okuberekwa kwezvakatipoteredza nemumiriri Greta Thunberg ndiye kwaAntikristu.
→ Chii unowana pakuparidza evanhu mutemo, Agenda 2030 uye okunze?
Kudzingiswa haina kushandiswa
→ Kudzingiswa haagoni kubereka kwamuri zvakare, asi inogona Jesu Kristu.
→ Vaya vakafa muna Kristu uchabuda mumakuva avo panguva hwamanda. Ivo ichachinjwa kuva nesu mupenyu.
Malle Lindberg anozadza makore 90
→ Ona yakasiyana mifananidzo uye vhidhiyo Malle Lindberg!
Akanga akabata kwaAntikristu shure
→ Chii anomudzivisa kwaAntikristu, saka kuti haangagoni kubuda panyika mudariro kusvikira nguva zvakanaka?
→ Ichi chimwe chezvinhu kuziva Mwari zvinoisa, sezvo ini ndamboita kuburikidza.
→ Rimwe zuva ndakaziva kuti Ishe wamuka zvirokwazvo uye weNobel weKarivari.
Ipa Sweden Jesu
→ maminitsi kubudikidza Christer Aberg 29
Jesu - vanhu rubatso
→ Jesu akamira rubatso rose pavanhu.
→ Nyika inoda vaKristu vane mwoyo unopfuta uye girazi inoratidza Jesu Kristu.
Islam anoda kutora pamusoro kuSweden
→ Pane hondo yomudzimu nyika yedu pakati chiKristu uye Islam.
Arne Weise afa
→ Swedenborg munyaradzi uye mysfarbrorn kubva Donald Duck kuti Christmas Evha ndiye akafa.
Jesu ndiye Muponesi chete
→ Christer Åberg Live nhepfenyuro maminitsi 29.
Female muNetherlands yakaitwa wakaiswa pa euthanasia
→ Zvino chiremba mudare uye kurangwa ari applåders inofadza iri mudare.
Kana uchida kupupurira Jesu Apg29?
→ Submit wako uchapupu, akanyorwa, mavhidhiyo kana zvakarekodhwa faira.
Kununurwa kubva mugungwa chivi
→ Christer Åberg Live chirongwa maminitsi 29 umo anoimba, kuridza ukelele uye kutaura nezvaJesu.
Saka ndakabhabhatidzwa muMweya
→ Christer Åberg rinotiudza mhenyu nhepfenyuro wake sei akava Spirit Christening
Season kutanga Kudenga TV7: A nyika vakaberekerwa marwadzo
→ "Kudai vaIsraeri vakanga Ruparadziko haana chakaitika."
Chifukidziro ndiko kupupura kuti Islam
→ Chidzitiro nguo kupupura kuti vaMuslim.
Apo Jesu chido? - Holger Nilsson
→ Holger Nilsson anotura bhuku rake idzva "Apo Jesu Will?" uye hurukuro pamusoro penyaya.
→ "A mufundisi akati, It rabuda kure, kuti zuva rimwe, muvhangeri simuka uti, Ndakagamuchira kuzarurirwa naIshe, inguva kutanga kunamata Mariya. It achaenda pokuti."
Ko vaKristu hapana counterweight pamusoro zvakaipa munzanga?
→ Vakuru vave kumanikidzwa kuvhara mumajeri, uye kunyange mumajeri Riva, vanhu vave nemamiriro naJesu vakachinja upenyu hwavo.
→ Christer Åberg anotaura sei zvakaita paakabhabhatidzwa
→ Kuitwa mutsvene ndiko kuva saJesu!
President Brazilian Bolsonaro kuda kurambidza nevanhukadzi dzidziso muzvikoro
→ vana School vanofanira kuchengetedzwa kubva chechikadzi dzematongerwe, anonyora President wenyika Brazil Jairi Bolsonaro musi Twitter.
A kutanga idzva Apg29
→ Panguva rechi18 gore I kutanga zvachose akakurumbira nzvimbo!
Saka I akaponeswa
→ uchapupu sei Jesu akamuponesa Christer Åberg vake.
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 09:57